I-MyCoolClass | Funda noma yini noma yikuphi
I-Platform yokufunda e-inthanethi
kusuka noma yikuphi.
Yini ofuna ukuyifunda namuhla?
Okupholile kunakho konke
Kwenziwe kwaba ngokwakho umuntu ngamunye izifundo kanye nezifundo ezibandakanyayo zeqembu zezingane nje!
Thola uthisha ophelele ngezifundo ezizimele zomuntu ngamunye noma izifundo ezijabulisayo zeqembu ukuze zivumelane nezidingo zengane yakho. Othisha bethu baqonda ukuthi izingane zifunda kanjani futhi zinikeze izifundo ezihehayo zisebenzisa izinsiza ezahlukahlukene, onodoli, nemidlalo.
Noma ngabe kwakhiwa amakhono aqinile olimi, ukufunda ithuluzi,
noma ukudala ubuciko, iMyCoolClass izosiza ingane yakho ithuthukise amakhono adingekayo ekusaseni eliyimpumelelo.
Ngaphandle kokuba muhle, bonke othisha bethu banjalo professional abafundisi kanye Ochwepheshe ekufundiseni izingane.
Thatha izifundo zangasese zomuntu ngamunye ezenzelwe ukukhulisa ukuzethemba nokuthuthukisa amakhono olimi. Othisha bethu banolwazi, ulwazi, namathuluzi okugcina ingane yakho izibandakanye isebenzisa imidlalo ehlukahlukene, izinsiza, nokuningi.
Ingabe ingane yakho iyabuthanda ubuciko, umdanso, umculo, isayensi noma ukufunda? Siyakuqinisekisa ukuthi ungathola inkambo ephelele. Bheka amakilasi ethu ahlukile ezihlokweni nezihloko ezahlukahlukene, ufunde nabangani abasha emhlabeni jikelele!
Umphakathi Womhlaba Wonke
Ngokungafani namanye amapulatifomu okufunda, bonke othisha bethu bebonke banenhlangano ye-MyCoolClass.
Njengokubambisana kwabasebenzi, imodeli yethu yebhizinisi iheha othisha abahamba phambili abavela emhlabeni wonke abahlangabezana namazinga aphakeme kakhulu.
IsiNgisi esingcono se
IsiNgisi sivula iminyango nezimakethe!
Ake sibhekane nakho. IsiNgisi ulimi lwamazwe omhlaba lwebhizinisi.
Noma ngabe usebenzela inkampani yomhlaba wonke, ufuna ukwehlukanisa imakethe yakho,
noma uye phesheya, ukuba yisikhulumi esiqinisekile se-English kukunika ithuba.
IMyCoolClass ifaka abafundisi abafaneleke kakhulu nabanolwazi
abavela emhlabeni wonke abagxile kwi-Business English.
Bonke othisha bangabachwepheshe abaqinisekisiwe futhi banikela ngezifundo ezenziwe ngezifiso
kanye nezifundo ezibandakanya okuqinisekisiwe ukuthuthukisa i- amakhono wokuxhumana futhi wakhe ukuzethemba.
Ngabe usebenza embonini efana nokungenisa izihambi noma ukuthengisa nokumaketha futhi udinga ukuxhumana ngesiNgisi? Othisha bethu abanesipiliyoni be-English English bazokusiza uchume endaweni yokuncintisana yamazwe omhlaba.
Ubufakazi bokusebenza kahle kwesiNgisi kuyinzuzo enkulu futhi kwesinye isikhathi kudingwa amanyuvesi nabaqashi. IMyCoolClass inothisha abagxile ekulungiseleleni izivivinyo ze-IELTS, TOEFL, Cambridge nokuningi.
Noma ngabe uthuthela eBarcelona, ​​eParis, noma eLos Angeles, ukufunda ulimi lwendawo kuzokwenza impilo ibe lula. IMyCoolClass inothisha ngezilimi ezingaphezu kwezingu-15 ukukusiza ukuthi uthuthukise amakhono owadingayo ukuze uchume ezweni elisha.
INCWADI A I-DEMO YAMAHHALA NAMUHLA!
Sinothisha abaningi abaqeqeshiwe ongakhetha kubo. Buka amaphrofayli namavidiyo ukuthola uthisha ofanele wena.
Incwadi Yakho Class
Funda lapho ufuna. Incwadi
usuku nesikhathi sokulingana nohlelo lwakho.
Mane nje ungene ekilasini bese uvumela i-adventure yakho yokufunda ukuthi iqale!
100% Abaqinisekisiwe Bothisha Abaqeqeshiwe
IMyCoolClass yamukela kuphela abafundisi abafaneleke kakhulu abavela emhlabeni wonke. Bonke othisha kumele baqedele inqubo yokuqinisekiswa okuzinyathelo ezi-4 eyenziwe yithimba lethu. Othisha kumele bavume ukuhlolwa kwesizinda sobugebengu ngaphambi kokufundisa emsamo. Siqinisekisa ukuthi bonke othisha bethu bahlangabezana namazinga aphakeme kakhulu.
I-MyCoolClass inikeza ukuqeqeshwa okuqhubekayo kokuthuthukiswa kobuchwepheshe ukusiza othisha bethu ukuba babe ngcono kakhulu.
© 2022 MyCoolClass Co-operative Limited | Wonke Amalungelo Agodliwe.
Joyina uhlu lwethu lwama-imeyili futhi uhambisane nezindaba zakamuva, amathiphu okufunda, namaphromoshini ezikhathi ezithile. Ungazikhipha ohlwini noma kunini. Inqubomgomo yobumfihlo
imeyili Faka ikheli lakho le-imeyili
Cha ngiyabonga, anginantshisekelo!
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi
Sisebenzisa amakhukhi kuwebhusayithi yethu ukukunikeza ulwazi olufanele kakhulu ngokukhumbula okuthandayo nokuphinda ukuvakasha. Ngokuchofoza "Yamukela Konke", uyavuma ukusetshenziswa kwawo wonke amakhukhi. Funda kabanziIzilungiselelo zekhukhiYamukela Konke
Ikhukhi ucezu oluncane lwedatha (ifayela lefayela lombhalo) ukuthi iwebhusayithi - lapho ivakashelwa ngumsebenzisi - icela isiphequluli sakho ukuthi sigcine kudivayisi yakho ukuze sikhumbule imininingwane ngawe, njengokhetha ulimi lwakho noma imininingwane yokungena ngemvume. Lawo makhukhi asethwe yithi futhi abizwa ngamakhukhi eqembu lokuqala. Siphinde sisebenzise amakhukhi avela eceleni - angama-cookies avela kusizinda esihlukile kunesizinda sewebhusayithi oyivakashelayo - kwimizamo yethu yokukhangisa nokumaketha.
Sisebenzisa amakhukhi ngezizathu eziningi
ukusebenzisa izinto ezibalulekile kuwebhusayithi ye-MyCoolClass,
ukuthuthukisa isipiliyoni sakho ngokusebenzisa i-MyCoolClass,
ukuqonda kangcono ukuthi abantu bayisebenzisa kanjani iWebhusayithi. Lokhu kungafaka amakhukhi avela kumawebhusayithi wezindaba zomphakathi wesithathu.
Kufanele ufunde le Nqubomgomo yamaKhukhi enemigomo kanye ne Inqubomgomo yobumfihlo.
Ungashintsha amasethingi akho amakhukhi nganoma yisiphi isikhathi ngokulandela imiyalo engezansi kwekhasi esigabeni esithi "Phatha amakhukhi akho".
Sisebenzisa amakhukhi nobunye ubuchwepheshe bokulandelela ngezinhloso ezilandelayo:
Ukuhlaziya indlela izivakashi, kuwebhusayithi yethu
Ukuhlaziya ukuthandwa kwamakilasi nezifundo
Ukusisiza senze izithuthukisi ezisebenzayo nezokuqukethwe kwiwebhusayithi yethu
Ukuphatha okuncamelayo kwamakhukhi
Ungasebenzisa okuncamelayo kwamakhukhi kuwebhusayithi ye-MyCoolClass, futhi ungafisa ukulawula amakhukhi ngezilungiselelo zesiphequluli sakho sewebhu. Iziphequluli eziningi zewebhu zivumela ukulawula okuthile kwamakhukhi amaningi. Ukuthola kabanzi ngamakhukhi, kufaka phakathi ukuthi ungabona kanjani ukuthi yimaphi amakhukhi asethiwe, vakashela ku-www.aboutcookies.org noma ku-www.allaboutcookies.org
Thola ukuthi uwaphatha kanjani amakhukhi kuziphequluli ezidumile:
I-Microsoft Internet Explorer
Ukuthola imininingwane ephathelene nezinye iziphequluli, vakashela iwebhusayithi kanjiniyela wesiphequluli.
Ukukhetha ukuphuma ekulandelweni yi-Google Analytics kuwo wonke amawebhusayithi, vakashela http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
sp_ukwehla 1 usuku I-sp_landing isethwe i-Spotify ukuze isebenzise okuqukethwe komsindo okuvela ku-Spotify kuwebhusayithi futhi iphinda ibhalise ulwazi ngokusebenzisana komsebenzisi okuhlobene nokuqukethwe komsindo.
sp_t 1 ngonyaka Ikhukhi ye-sp_t isethwe i-Spotify ukuze isebenzise okuqukethwe komsindo okuvela ku-Spotify kuwebhusayithi futhi iphinda ibhalise ulwazi ngokusebenzisana komsebenzisi okuhlobene nokuqukethwe komsindo.
_gat Iminithi ye-1 Le khukhi ifakwa yi-Google Universal Analytics ukuvimba isilinganiso sesicelo futhi ngaleyo ndlela ikhawulele ukuqoqwa kwedatha kumasayithi aphezulu wezimoto.
_ga iminyaka 2 Ikhukhi le-_ga, elifakwe yi-Google Analytics, libala idatha yezivakashi, iseshini nomkhankaso futhi ligcina ithrekhi yokusetshenziswa kwesayithi kombiko we-analytics wesayithi. Ikhukhi ligcina imininingwane ngokungaziwa futhi linikeze inombolo eyenziwe ngokungahleliwe ukubona izivakashi ezihlukile.
_gid 1 usuku Kufakwe iGoogle Analytics, ikhukhi le-_gid ligcina imininingwane yokuthi izivakashi ziyisebenzisa kanjani iwebhusayithi, ngenkathi futhi lenza nombiko we-analytics wokusebenza kwewebhusayithi. Eminye imininingwane eqoqiwe ifaka phakathi inani lezivakashi, umthombo wazo, namakhasi abavakashela kuwo ngokungaziwa.
KULUNGILE iminyaka 2 I-YouTube isetha leli khukhi ngamavidiyo e-youtube ashumekiwe futhi ibhalisa idatha yezibalo engaziwa.
ISIVAKASHI_INFO1_LIVE Izinyanga ze-5 izinsuku ze-27 Ikhukhi elisethwe yi-YouTube ukukala umkhawulokudonsa onquma ukuthi umsebenzisi uthola i-interface entsha noma endala yesidlali.
I-YSC Iseshini Ikhukhi le-YSC lisethwe yi-Youtube futhi lisetshenziselwa ukulandelela ukubukwa kwamavidiyo ashumekiwe emakhasini e-Youtube.
yt-akude-axhunywe-amadivayisi ungalokothi I-YouTube isetha leli khukhi ukuthi ligcine izintandokazi zevidiyo yomsebenzisi esebenzisa ividiyo eshumekiwe ye-YouTube.
yt-kude-idivayisi-id ungalokothi I-YouTube isetha leli khukhi ukuthi ligcine izintandokazi zevidiyo yomsebenzisi esebenzisa ividiyo eshumekiwe ye-YouTube.
I-cookielawinfo-checkbox-iyasebenza 1 ngonyaka Ikhukhi lisethwe yimvume yekhukhi ye-GDPR ukuqopha imvume yomsebenzisi yamakhukhi esigabeni "Okusebenzayo".
izinga log ungalokothi Ayikho incazelo etholakalayo.